Akụkọ - YIWU, China, Mee 12, 2020 / PRNewswire / - Na Mee 10, 2020, amalitela mmemme ịntanetị 2020 China Brand Day.
YIWU, China, Mee 12, 2020 / PRNewswire / - Na Mee 10, 2020, amalitela mmemme eventbọchị Ọhụrụ nke China China.
YIWU, China, Mee 12, 2020 / PRNewswire / - Na Mee 10, 2020, amalitela mmemme eventbọchị Ọhụrụ nke China China. Dịka ihe ngosi akara ngosi kwa afọ dị na ahịa Yiwu, asọmpi asọmpi Top 10 nke Yiwugo amalitela usoro ịme ntuli aka.
Asọmpi a, nke emere nke ọma n'afọ nke asatọ sochirinụ, gosipụtara ọtụtụ ụdị azụmaahịa mba ofesi, dịka Hailing GEMEI Small Home Appliance Firm, Nicole Fashion Jewelry, Zongxin Canvas Shoes, na BAOLA, wdg. ndị na-ere ahịa gosipụtara mmata akara ma gosipụta ike ha nwere, Yiwugo emeela mgbanwe ụfọdụ na mmemme a. Ka ị na-aga n'ihu ịhọrọ "Ndị na-ere 10 kacha elu", asọmpi a ga-egosi 10 "Ndị na-eduga mgbere", 80 "Ndị mgbere Model" na 120 "Ndị na-ere ahịa Elite" Okwesiri ighota na, na mbido nke "Live Streaming Era for All", agbakwunyela onyinye "Top 10 Influencers" na mmemme onyinye nke asọmpi afọ a, na-eche ndị ahịa aka igosipụta onyonyo ụlọ ọrụ ha na ụdị site na ndụ gụgharia, si otú a na-adọta uche ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa n'ụzọ doro anya karị. Usoro ịme ntuli aka ga-amalite na Mee 10, 2020 wee kwụsị rue Disemba 31, 2020. A ga-ekwupụta nsonaazụ ya mgbe Jenụwarị 1, 2021 gasịrị.